China Ultrasonic nyocha sterilizer PBD-S3 rụpụta na ụlọ ọrụ | Emeela
Ultrasound proer sterilizer PBD-S3 bụ ihe nyocha ultrasonic nke disinfection nke na-eji ọtụtụ teknụzụ ọhụụ. PBD-S2 pụrụ iche na-eji teknụzụ disinfection nke oyi iji mezue disinfection akpaka nke nyocha ultrasound na 30-60 sekọnd, nke na-arụ ọrụ nke ọma, ngwa ngwa na gburugburu ebe obibi. Ọ na - edozi nsogbu nke ọrịa disinfection, na - ebelata ohere nke ibute ọrịa, wee nweta nkọwapụta disinfection maka otu onye otu oge. Enwere ike imepụta disinfection abụọ nke nyocha n'otu oge, na-echekwa ego na oge na-achọpụta ihe ọhụụ na ihe ọhụrụ na disinfection nke ultrasound nyocha!
1. oke index:
1) ịmụta UVLED elu ugboro na ala wavelength oyi ultraviolet disinfection technology.
2) Oge ojiji nke UV ikanam bụ ≥3 afọ, na ụdị UV dị iche iche bụ 250 ～ 280nm.
3) Ike ọkụ nke etiti: ike ọkụ na 6cm bụ ≥500uw / ​​cm2.
4) Nhazi oge: 30 na 60 sekọnd.
5) Ngwurugwu di elu ejiri mechaa na 60 sekọnd, na ogwu ogwu nke Bacillus subtilis bu ≥99.9%.
6) Iru disinfection ọkara na 30 sekọnd, E. coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Mycobacterium chelonae, wdg ≥99.9%.
7) Disinfection nke anụ ahụ, enweghị mmebi nke oghere mkpuchi na ụlọ nyocha, yana mmezi ụlọ nyocha na mkpuchi antibacterial.
8) Ugboro abụọ disinfection tank imewe nwere ike disinfecting abụọ nyocha n'otu oge, otu onye nke bụ intracavity nyocha.
9) Ihe mkpuchi zuru ezu na akpaka na disinfection zuru ezu.
10) Ngosipụta dijitalụ nke oge disinfection.
11) oghere nyocha nwere ihe mmetụta sensọ, nke na-achọpụta na akpaghị aka ma enwere nyocha yana ma etinye nyocha ahụ. Mgbe disinfection ahụ gwụ, anaghị achọ disinfection ya ọzọ.
12) Ihe eji eme mmadu, imeputa ihe, adighi emetuta oge dọkịta.
13) Ọ na - eburu obere oghere ma dịkwa mfe ịkwaga.
14) Kwesịrị ekwesị maka afọ, obere akụkụ, obi, ikpu, ikensi, nyocha intraoperative.
15) Nha ọbịa: 430X218X130MM, nha nke akụrụngwa ≤25KG.
16) Ọnọdụ ọrụ
Ọnọdụ ihu igwe: (5 ～ 40) ℃, iru mmiri ikwu: (30 ～ 75)%
Ike ọkọnọ voltaji: ~ 220V, nkwụnye ọkụ ugboro: 50Hz
17) Oge ikike: ọnwa iri na abụọ.
18) ọrụ awa 7X24
.Dị Ultraviolet sterilizing ngwaọrụ
Nọmba nlereanya PBD-S3
Agba acha anụnụ anụnụ
Oge disinfection Seconds 60 sekọnd
UV ikanam spectral nso 260-280nm
UV Ikanam voltaji 5.5-7.5V
UV ikanam Ugbu a ≤200ma
Mmepụta ìhè ike ≥10mw
Modul UV ikanam ike ≥500μw / cm2 (7cm si etiti)
Nha ọbịa L428mm * W218.8mm * H207.6mm
Nkwado mkpanaka (mpaghara, elu) nha 50mm * 50mm, elu 580-1000mm
Ike ntinye AC 220V 50HZ
Gosiri ike ≤90W 50Hz
ibu ibu ≤15KG
1) Innovation: ihe omimi di elu na ihe nkpuchi nkpuchi ihe omimi nke ihe omimi na ihe ojoo
2) Ngwa ngwa: Naanị mkpa 30S, 60S iji mezue ọkara na elu larịị disinfection na nwoke ịga ụlọ ọgwụ.
3) Nchedo: Disinfection zuru oke na-enweghị aka aka, nchekwa na ntụkwasị obi.
4) Nchedo gburugburu ebe obibi: Ikanam disinfection technology nwere ogologo ndụ, ala ike oriri, na bụ environmentally friendly.
5) ọgụgụ isi: Tinye ya nwayọ, na-agbanweghi omume dọkịta, ọgụgụ isi na nje na-akpaghị aka.
6) ogbi: pụrụ iche iche na ogbi na-arụ ọrụ mode, ọ dịghị mkpọtụ nnyonye anya ihe.
Ultrasound Nyocha Sterilizers
Ime ụlọ nke sterilizer na-eji UV ọkụ ọkụ ọkụ na-eme ka ọkụ na-acha ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ na ultraviolet na mgbakwunye teknụzụ ọkụ ion, na-eji njide ihe nyocha, usoro ntinye akpaka na ihe mmịpụta ihe na igwe na-akwado igwe, 30 sekọnd, 60 sekọnd iji mezue nyocha ultrasonic nke Ọkara na disinfection na akwa, na-arụ ọrụ nke ọma, ngwa ngwa, na gburugburu ebe obibi, dozie nsogbu nke disinfection probe, belata ihe ize ndụ nke nyocha ọrịa, ma mezuo ihe otu onye chọrọ, otu iji, otu disinfection na na disinfection nkọwapụta.
Technicalkpụrụ Nka na ụzụ
N'iji ike nke 260nm-280nm miri emi na-acha ọkụ ọkụ nke sitere na ultraviolet LED, ìhè oyi na-ebibi ngwa ngwa na protein nke DNA (deoxyribonucleic acid) ma ọ bụ RNA (ribonucleic acid) na sel nke microorganisms. Na ọnwụ mkpụrụ ndụ ịmụrụ nwa iji nweta nsị. Igwe ultraviolet oyi na-acha nwere njirimara nke oge dị elu na mkpụmkpụ mkpụmkpụ, nke nwere ike ime ka elu nke ihe ahụ ọkụ na-enweghị mmebi na-emebi ngwa ngwa. Ihe dị n'ime ike na-adịghị ahụkebe nke dị n'ime na nke na-adịghị mma na-achọpụta disinfection space nwere akụkụ atọ, yana nwekwara ike ikpochapụ ụfọdụ oghere na nkuku.
1) 30S, 60S nwere ike mezue ọkara na elu larịị disinfection na nwoke ịga ụlọ ọgwụ
2) Disinfection nke anụ ahụ, enweghị mmebi nke oghere mkpuchi na ụlọ nyocha.
3) Enwere ike dochie uzo nyocha n'oge ọ bụla dịka ọdịdị nyocha.
4) Mbuli na-akpaghị aka, ọrụ niile na-agbachi nkịtị, ihe niile nwere ọgụgụ isi.
5) Ngosipụta dijitalụ nke oge disinfection.
6) A na-ewu ihe mmetụta infrared n'ime oghere nyocha, nke nwere ike ịchọpụta na akpaghị aka ma enwere nyocha ma ọ bụ na ọ bụghị.
7) Mgbe emechara disinfection, a gaghị emeghachi disinfection ahụ ọzọ.
8) Ihe eji eme mmadu, agbanweghi agwa dibia nke iji nyocha.
Isi 1 ibe
Kọlụm 1 ibe
Na-enyocha mmanụ 1 kalama
M10 ịghasa 1 ibe
Ntụziaka ntuziaka, akwụkwọ, kaadị ikike 1 oyiri
Nke gara aga: Ultrasonic nyocha sterilizer PBD-S1
Osote: Houselọ nkwakọba ihe na akụrụngwa disinfection
3.5 Mhz Ultrasound Nyocha
Ime Ultrasound nyocha
Bluetooth Ultrasound Nyocha
Cardiac Ultrasound Nyocha
Nyocha Ultrasound nyocha
Medical Ultrasound Ngwaọrụ
Ahụike Ultrasound Transducer
Medical Ultrasound Nyocha
Nhazi usoro nyocha nke Ultrasound
Obere Ultrasound Nyocha
Robotic Ultrasound Nyocha
Obere nyocha Ultrasound
Nyocha Ultrasound Machine
Ultrasound Machine na-enyocha ụdị
Ultrasound Nyocha Ahịa
Ihe nyocha Ultrasound
USB C Ultrasound nyocha
Nyocha Ultrasound USB
Nyocha Ultrasound Wifi
Ikuku Ultrasound nyocha
Ikuku Ultrasound Nyocha Ahịa
Ekwentị mkpanaka na-ehicha ikuku AirH-Y600H
UV elu Ewepụghị Irradiation Air Disinfector AirH -...